Samaynta 3D videos waa soo baxaya sida hamiday cusub ee warshadaha sameynta filimka. Iyadoo blockblusters 3D cusub abuuraya sheekooyin guulo in industry filimka, qaar badan oo ka video tifaftirayaasha is jiideen u aqoonsanaya 3D video qaadashada ay line cusub ee takhasuska. 3D video inta badan daawaday iyadoo la kaashanayo ku koob 3D waa kuwo xiiso iyo buuxiyo daawadayaasha ay ku faraxsan yihiin sida ay dareemaan in ay yihiin video gudaha. Iyadoo qaar ka mid ah software Ciyaar aad abuuri karaan koox dhinac 3D video. Halkan waa tutorial faahfaahsan loogu sidaas samaynaya isticmaalaya cut software pro final.
1. Ku rakib software:
Download iyo rakibi Final Cut Pro oo laga heli karo lacag la'aan ah ee internet-ka iyo sidoo kale waa doorasho fiican u abuuraya dhinac 3D video. Waxaa rakib in computer si fiican.
2. Import iyo kaydka files isha
Si ay u dajiyaan videos ah, la abuuro bin ah oo lagu kaydiyo doona faylasha video loogu abuuro koox dhinac 3D video. Wixii la abuuro bin ah, xaq guji dooro bin cusub ama tag files dooro bin cusub.
Magaca bin sida halkii aad looga baahan yahay oo u badbaadin.
Jiid files isha inay bin ah oo kuwan oo il files inay ku jiraan isha bidix iyo isha midig.
3. xigxiga Abuuritaanka
Samee isku xigxiga oo cusub oo ag maraya in file bilowga> xigxiga oo magaca.
Xigxiga wuxuu ku bilaabmayaa by jiidayeen isha video xaq u hoos gelin waqtiga kaas oo noqon doona lakabka video hoose.
Sanduuqa A hadal waydiinaya oo ku saabsan in la beddelo qaab video arbushin ilaa doona. Dooro haa waxa ku jira.
Kaalay pin isha ka dibna jiidi in video ah isha bidix miiska ka kooban.
4. Ku darista saamayn si videos ah
Dooro video saxda ah ee waqtiga.
Sidaas si ay bar menu. Riix Effects Video filters Channels fiicni Channel.
In daawadayaasha dooro tab filtarrada.
Si aad u baabi'iyo cas oo dhan, iyo sidoo bedesho qiimaha cas 0. In daawadayaasha sida shiraac, video buuxiyo buluug.
Dooro isha video tagay hadda waqtiga.
Si aad u baabi'iyo dhammaan midabka buluug cagaar ah, iyo sidoo bedesho qiimaha cagaaran buluug in 0. In daawadayaasha sida shiraac, video buuxiyo guduudan.
5. Isku iyo labada qabsado videos ah
Xaqa guji video ugu sareeya waa in ay video weershe bidix. In hab kooban dooran daro.
A image 3D isku darsamay waxa loo sameeyay iyo waxa loo baahan yahay in ay si fiican u safan b.
Riix hoose menu in balaarinta image sare oo dooro. A cross calaamad u muuqata on footage ah.
Yarey ee shiraac ah adigoo gujinaya ku yaal oo boggan.
Dooro video ah oo ay isku dayaan in ay waafajiyaan labada videos ka mid. Isku day inaad ka fogaato fringing intii suurogal ah. Image A mid aad u nadiif ah waxaa halkan ka soo saaray.
Yarey on video shiraac ah oo ay u soo baxay boggan.
Laakiin halkan waxa jira underlap on sare iyo xirmi hoose ee video shaashadda shiraac ah.
Dooro tagay video ama weershe ah ee waqtiga .Dooro tab mooshin ee kooxda daawadayaasha iyo dhigay size in ay 103%.
Sidoo kale doortaan video ama weershe ah xaq on waqtiga. Dooro tab mooshin ee kooxda daawadayaasha iyo dhigay size in ay 103%.
Dooro mid ka mid video on waqtiga ka dibna la iilanin guji in ay doortaan labada videos ku saabsan waqtiga.
Riix shiraac ah oo u guuraan ilaa ay jirto ku laayeen madow qaado sudhaan. Haddii uu jiro shay isku dhaceen in jir ah sida lagu muujiyey, wayna dhaqaaqi si ay uu saaro. Si taas loo sameeyo qaban hoos u muhiim ah ikhtiyaarka iyo isticmaali falaaraha. Waxaan asal ahaan iyadoo Jilib Xidhan footage iyo helay footage a 3D aad u nadiif ah ku shiraac ah.
6. Readjusting fursadaha filter ah
Click on the video weershe bidix oo taga si filtarrada tab ee liiska daawadayaasha. Hubi doorasho filter sida lagu muujiyay oo tirtirto.
Xaqa guji footage la mid ah oo ay doortaan hab kooban si ay u dejiyaan in ay caadi.
Sidoo kale laba jibaar riix video ama weershe ah xaq oo taga si tab filtarrada in liiska daawadayaasha. Hubi doorasho fiicni channel oo ku tirtirto.
Guji button sida ku cad bar menu oo qarka u saaran inuu kaliya image.
Waxaan u tirtiray filter iyo channel fiicni oo dhan si ay u abuuraan kooxda laba nooc kooxda rikoor.
Si aad u soo saarto iskusoo noqnoqonaya ee dhinaca jir ah:
Haddii aan la baabi'iyo xirmi ah, waxaan noqon doonaa daaha macluumaad oo ma uu fiirin doono in weyn.
7. In la abuuro isku xigxiga nested
Dooro ka tagay weershe video taga si menu isku xigxiga ee bar menu ka dooro on waxyaabaha soo socda.
Sanduuqa hadal A ilaa booda oo renames sida aad u.
Hadda dooro saxda ah ama weershe video taga si menu isku xigxiga ee bar menu ka dooro on waxyaabaha soo socda.
Samee bin cusub bin isha oo hoos u jiidi kuwa nested u galay si pin isha haatan u muuqataa yara abaabulay.
Si aad isku dubaridi video ah, dooro video ah oo xaq guji ku yaal. Doortay furan in daawadayaasha.
Dooro mooshin ee tab ay daawadayaasha iyo si loo xakameeyo mooshinka, guji gacanta ku dhaqaaq iyo xaq sare iyo xaq hoose keeno eber tan iyo markii ay kooxda hadha ayaa weershe video.
Sidoo kale waxa ay samayn, waayo, video ama weershe ah laakiin haddii ay taasi ku beddelo dhanka bidix ee sare iyo hoose ee bidixda eber.
Hadda waxa kale oo aad isbedel ku Labada nin ee lagu hafray hore ka dhigi kartaa adigoo gujinaya ku yaal.
Waxaa ugu dambeyntii haya'ad:
Waxad abuuri kartaa haamaha cusub badan oo jiidi footages aad badan in ay jirto iyo in la abuuro video a 3D. Si aad u badbaadin, inaad u Gudaan.
Haddii aad u baahan tahay 2d si aad u 3D video Converter, waxaad qaadan kartaa Wondershare Video Converter Ultimate tixgeliyaan, taas oo loogu badalo kartaa 2d videos in 3D gudahood dhowr qasabno. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
The Shabakadaha Best u Daawashada Sports Online
13 Talooyin in la sameeyo ugu MPEG Streamclip
> Resource > Video > Sida loo abuuro dhinac 3D Video